Staff Directory - Utah Pride Center
Stacey Jackson-Roberts akaberekwa uye akarererwa kumafuro epfuyo uye ...
... muBeverver, Utah. Nehukama hwemhuri munzvimbo dzekumaruwa dzeUtah, anoziva zvazvakaita kukura munharaunda dzisinganyatso simbisa vanhu veLGBTQ +. Jackson-Roberts anoronga kushandisa chiitiko chehupenyu kutarisisa kuwedzera zviwanikwa munzvimbo dziri kure dzenyika uye munharaunda dzakatarisana.
"Semwana we transgender achikurira mutaundi diki kumucheto kweUtah, zvaive zvakaoma kuwana zvemunhu uye kugamuchirwa. Ndinoziva kuti kune vechidiki veLGBTQ + munzvimbo zhinji dzekumaruwa dzenyika dzinoda rutsigiro, dzinoda kuziva Utah Pride Center iripo kwavari, uye inoda kuti vanzwe vachinzwikwa, kudiwa, uye kugamuchirwa, "akadaro.
Saiye Mutungamiriri Therapist we LGBTQ + Behaeveal Health, paFederally Qualified Health Center muBaltimore, Stacey akavaka mutsetse wakazvipira weLBBTQ + masevhisi munharaunda zhinji yeBIPOC mune yakanyanya kudiwa, guta risina kuchengetedzwa. Ari imomo akashanda achiumba mubatanidzwa wemubatanidzwa BIPOC, LGBTQ +, masangano ezvehutano, uye masangano evashandi kupasisa mutemo wenyika muMadganis. Izvi zvaive zvakakosha mukuita kuti Preexposure Prophylaxis (PrEP) iwanikwe. Stacey akabatsirawo kuwana Collective Action for Safe Spaces, iyo inoshanda kupedza mumigwagwa-yakavakirwa kushungurudzwa kwepabonde uye kushungurudzwa pakati pevakadzi, queer, trans, vatema, uye vanhu vemuno vevara munzvimbo yeWashington DC. Iye zvakare akamboshanda seHealth Policy Shamwari neTransgender Law Center muCalifornia, achishandira kuwedzera hutano hwehutano hwevakadzi vakasiyana vanhu.
Asati aenda kuDC Jackson-Roberts akawana degree rake reBachelor muMutemo uye Bumbiro reMitemo kubva kuUtah State University. Zvimwe zviitiko zvinosanganisira: MSW, Clinical Social Work kubva kuSmith College Chikoro cheSocial Work muNorthampton, MA Executive Council Nhengo uye Delegate, 1199SEIU: United Healthcare Workers East, 400,000+ nhengo zhinji-vashoma mubatanidzwa muNY, MA, MD, DC, FL , uye NJ neHQ mu NYC. Muridzi wemabhizimusi madiki / Akavanzika Anodzidzira Therapist Stacey Jackson-Roberts achatanga basa rake se CEO kuUtah Pride Center musi wa Gunyana 1, 2021. Ari kuronga kutanga rwendo rwekuteerera kuUtah kuti anzwe kubva kunhengo dze LGBTQ + kuti vaone kuti Utah Pride Center inogona sei zvirinani kushandira nharaunda dziri muUtah. Iye anozotarisawo mukuwedzera chaiwo uye epamhepo masevhisi kuti asvike vanhu vazhinji kutenderera nyika.
Director wevechidiki, Mhuri, & Dzidzo Zvirongwa
Amanda ane Master's degree muDzidzo uye ...
... Bachelor's degree muClinical uye Counselling Psychology, zvese kubva kuWestminster College muSalt Lake City, Utah. Anofarira kubatanidzwa uye kurongeka munharaunda.
Amanda akatanga kurwira kwake nekutsvaga kwake pamusoro peMhedzisiro yeHeteronormative Kirasi Yemamiriro ekunze paLGBTQ + Vadzidzi.
Pamberi peUtah Pride Center, Amanda aishanda mune yepamusoro uye epuraimari dzidzo.
Amanda anoshanda kuUtah Pride Center kuita kuti dzimba dzigamuchire uye dzigamuchire vechidiki uye mhuri, zvikoro nenzvimbo dzemunharaunda dzinosanganisira vese, uye kudzidzisa mazera azvino neramangwana nezve yedu inoshamisa LGBTQIA + nharaunda.
Mune basa iri, Kimberly achatarisira masevhisi edu ehutano hwepfungwa uye kugadzirira ...
...sevhisi uye gadzirira kuwedzera mhando dzekiriniki-zvehutano-masevhisi ayo Utah Pride Center inopa.
Kimberly Gillette ave ari murapi wemakore ekupedzisira e10 kubva paakapedza kudzidza kubva kuSmith College School for Social Work mu 2011. Kimberly ane ruzivo rwekushanda munzvimbo dzakasiyana-siyana kusanganisira kunze, chipatara, uye zvikoro, asi achichengetedza tsika duku yega yega yekupedzisira 5 makore akatarisana nekushandira LGBTQIA + vechidiki nevakuru. Kimberly akaona kudikanwa kwekuchengetwa kwe trans-centered mushure mekunge mumwe wemumhuri abuda seasiri bhinary uye akaona kushomeka kwevanopa dzidziso iyi. Kubva ipapo, Kimberly akawana kudzidziswa kubva kuWorld Professional Association yeTransgender Health Foundations (WPATH), Philly Trans Wellness Conference, mamwe masangano akasiyana. Nguva pfupi yadarika, Kim akapedza chitupa chemwedzi gumi muAdvanced Transgender Zvidzidzo: Affirmative Therapy yeTransgender Communities kuburikidza neWidener University.
Kimberly akakurira muColumbia, Maryland, asati aenda kuchikoro uye kutanga basa rake muMassachusetts.
Anga ari mumhanyi kubva muna 2012. Mangwanani mazhinji anomuka na4:30 mangwanani kuti amhanye neboka revakadzi vakasimba, vakangwara uye anoti ndiyo nguva yaanofarira kwazvo. Akadanana naUtah paakamhanya hafu-marathon yeMoabhi muna 2019.
Director weVakuru Chirongwa
Deb Hall akapedza makore makumi maviri nematatu ekutanga ebasa rake achishanda mu ...
... indasitiri yekutaurirana yemakambani maviri makuru kwazvo. Kubudikidza nemakambani aya, aive nemukana wekubatanidzwa mumabasa mazhinji enharaunda, akashanda saChiefUnion Steward uye akadzidza kutsigira vanhu vakasarudzika. Iye zvakare aive nemukana wekuve mudzidzisi muMath uye Chirungu seChipiri Mutauro.
Mushure mekusiya Corporate American, Deb akatamira kune isingabatsiri nyika inoshanda munzvimbo dzakasiyana dzemasangano mazhinji anosanganisira Kurume weDimes, Ronald McDonald House, Girl Scouts yeUtah, Alzheimer's Association uye ikozvino Utah Pride Center. Deb zvakare ane mamiriro ekurapa uye ekuchengetedza hanya uye anoramba achipa masevhisi seyekufa doula.
Deb ane shungu nezveAlzheimer's uye mamwe ma dementias uye anoshanda kazhinji sechiremba wekuchengetedza dementia achishanda nemhuri dzichipa rutsigiro sezvavanoedza kufamba muchirwere.
Deb anogara pamabhodhi uye maKomiti eSalt Lake County Kukwegura uye Adult Services, State of Utah Dhipatimendi rehutano Hutano hweAlzheimer uye Dementias Yakabatana, Utah Commission yekukwegura, Alzheimer's Association Dhivhizheni uye Inobatanidza Komiti uye Salt Lake County Dhipatimendi Rezvehutano Kuwana uye Rinoshanda Rinodiwa Komiti .
Deb ine madhigirii uye zvitupa muLegal Studies, Gerontology, Bhizinesi Management, Yoga Kurovedzwa, Hospice uye Palliative kuchengetedza uye Med Tech. Mamwe makosi asinganzwisisike aakatora kutamba nedumbu uye hula hooping. Dai aikwanisa kuve nechishuwo chimwe chakazadzikiswa, zvaizove kuve nerusununguko rwekuenda kuchikoro zvachose, zvemahara hongu!
Deb rakabuda makore makumi matatu apfuura, asi rakatanga kubatanidzwa nenharaunda yeGBBTQ makore gumi nerimwe chete apfuura paakazvipira kuPride Festival Committee. Munguva iyoyo Utah Pride Center yakava chitsauko chekubatana cheSAGE USA. Deb akakumbirwa kuti atungamire komiti yeSAGE uye akazviita kweanoverengeka makore, achiisa pamwechete uye nekuchengetedza avo vekutanga vagari venharaunda kutora chikamu mune SAGE dumba paPride Festival.
Mu2018, Deb akatora SAGE komiti sachigaro chinzvimbo zvakare semuzvipiri uye mwedzi mitanhatu gare gare, akatanga semubhadharo mushandi wePride Center munzvimbo yeManeja weVakuru Mapurogiramu neAdvocacy, izvo zvinotungamira kuchinzvimbo chiripo saDirector weVakuru. Zvirongwa.
Deb anosarudza kushanda kuPride Center mune rake razvino basa nekuti anotenda kuti pane ese mabasa aakabata panguva yese yebasa rake anga achimutungamira kune iri rimwe basa rakakwana.
Kugadzira nzvimbo yakachengeteka kune vese, uchiziva kuti iyo Center imusha. Ndakaedza kubatana nesangano iri rinoponesa. Ndinotarisira kuzoziva mumwe nemumwe wedu wevatsigiri, vanozvipira uye nhengo. Inzwa wakasununguka kusvika kwandiri uye uti hesi!
Interim Director weCommunity Engagement
Tanya Hawkins chizvarwa cheSalt Lake Valley. Tanya anonakidzwa nekushanda...
... munharaunda uye mutsigiri wehunyanzvi, sainzi, uye kunze. Anoisa mari maari Read More
nharaunda nekuve inoshingaira kanzuru nhengo yeUtah Multicultural Civic Council.
Iye anofarira kushandisa nguva nemuzukuru wake uye muzukuru uye achivaunza ivo kune akasiyana mazano uye tsika.
Parizvino arikutsvaga degree muInformation Technology. Tanya anotenda kuti kukosha kwakazara kwehupenyu kunowanikwa nekuve nekuzvimbundira. Iye anotenda kuti pane nguva dzose pane chimwe chinhu chakanaka chinodzidziswa kubva kune mumwe munhu zvisinei neruvara rwake, tsika, murume kana mukadzi, zvepabonde, zvitendero, zera, kuremara, uye / kana hupfumi mamiriro.
Mutungamiriri weOp Operations & Administration
John Johnson ane nhoroondo refu neUtah Pride Center ...
... uye ikozvino inoshanda seOp Operations & Administrative Director weiyo UPC nzvimbo uye mutambo.
Sezvo akakwidziridzwa muMidwest, akapedza kudzidza kubva kuYUU aine mabachelors muBusiness Management & Mari. Akashandira matatu emuno asiri purofiti uye muindasitiri yeZviitiko uye anounza chiitiko ichocho kuPride Center zvakare.
John akashanda semuzvipiri, akapfuura nhengo yebhodhi uye Mutungamiriri weMutambo pamusoro peyakareba makore makumi maviri+. Yake yakasanganiswa isiri-purofiti, kutengesa / kushambadzira uye zviitiko zvezviitiko zvakabatsira kuvaka iyo Utah Pride Mutambo kuve imwe yezviitiko zveUtah zvepamusoro.
John anonzwisisa kukosha kwenzvimbo yega yega kuva neimba. Uye kuti imba inogona kureva zvinhu zvakawanda zvakasiyana kunhengo dzakasiyana "dzemhuri". Anoshamiswa nekukura kweCentre, zvirongwa zvakawandisa uye padanho iro nharaunda yeGBBTQ inonakidzwa nenzvimbo yavo yenharaunda vhiki nevhiki.
Bvunza John chirevo chake chehupenyu uye anokuudza, "Chero chinhu chakakosha kuita chakakosha kudarika." Uye kune izvi isu tinotenda kuva naye pachikwata chedu.
Mutungamiriri weRainbow Wellness
Sarah MacCombie ane marezinesi emabasa ekurapa uye
sangana nemakiriniki ehutano hwepfungwa anopa mazano muLGBTQIA2S + hutano uye hutano.
Akagamuchira degree rake rekupa mazano kubva kuCalifornia Institute of Integral Zvidzidzo aine tarisiro yezvemweya East-West psychology. Iye zvakare anoshanda mune gerontology uye anga achishanda munzvimbo dzine hunyanzvi hwevanamukoti kwemakore masere apfuura.
Kuda kwake kuri kutsigira vamwe mukukudziridza kuzviziva, kuzvida-rudo uye hukama hwechokwadi newe nevamwe.
(ivo / ivo)
Michelle ane Rezinesi Clinical Yemushandi uye akamupa ...
... Master's yeSocial Work degree uye giredhi chitupa muGender & Vakadzi Zvidzidzo kubva kuMinnesota State University, Mankato. Iye undergraduate degree iri mune Zvematongerwo enyika Sayenzi kubva kuSt Olaf College.
Michelle akapedza gore rake rekutanga semushandi wezvemagariro semurapi werenje muWest Desert yeUtah. Michelle akapedza kiriniki yake yekudzidzira kuTransgender uye Intersex Specialty Care Clinic paMayo Clinic muRochester, MN, kwaakashanda pamwe nevanhu vasingaenderane nevanhukadzi vanotanga shanduko yavo nevaya vaitsvaga nzira dzekurapa.
Michelle akapedza Bonde Positive Professional Certification kuburikidza neCent for Positive Bonde. Iye anoshanda mukushanda nevatengi vanozivisa seLBBTQIA + uye avo vane hutano hwakasiyana, kusanganisira kink uye polyamory. Iye akadzidziswa muMindfulness Based Based Stress Reduction, yin uye hatha yoga, uye inosanganisira kufunga nekurapa kwevakadzi mune rake basa nevatengi.
Lane murapi wehutano hwepfungwa anotenda mu ...
... kukosha kwehunhu uye simba remukati remumwe neumwe uye anoedza kubatsira vatengi mukuwana kubudirira zvakanyanya uye kugutsikana kwevanhu mumatunhu ese ehupenyu.
Lane akawana BA muSociology ine undergraduate zvitupa muDhiversity uye Criminology & Corrections. Lane akashanda neUniversity yeUtah's Center for Disability & Access kubvira 2009 kubatsira vadzidzi vakaremara, nguva pfupi yadarika seDisability Advisor.
Lane akashandawo munzvimbo dzakasiyana siyana kubvira 2006 mukati meBhodi reVatungamiriri veCrossroads Urban Center, yemuno isiri purofiti chikafu chevanodya nesangano rezvemagariro, pamwe nekumisikidza zvinzvimbo zveBhodi paboka rekuita Ita Nzara Ioneke kubvira 2003.
Lane akashanda semubati wepanzvimbo achidzidzisa pamusoro penyaya dzekuremara, lgbtq + kuzivikanwa uye nenyaya, uye kururamisira kwevanhu kwakanangana nenzara, kushaya pekugara uye mimwe misoro yakanangana nekuderedza kuoma uye kuwedzera simba revarombo uye vane mari shoma.
Vechidiki, Mhuri & Mudzidzisi Murongi
Kuuya manje manje!
Annelise Murphy akapedza kudzidza neMasters Degree muKiriniki ...
... Mental Health Counselling kubva kuBradley University. Ane Bachelor of Science mu Psychology kubva kuYunivhesiti yeUtah. Akaburitsa chidzidzo nezve asiri-monogamy muJenali yeSocial Psychology uye Hunhu hweSainzi, achitarisa kugutsikana kwehupenyu, kugutsikana pabonde, uye hupenyu hwehupenyu kune vanhu vanovhura hukama hwavo hwepamoyo. Akagara muUtah hupenyu hwake hwese uye anoziva nezve yakasarudzika tsika iyo inogona kukonzeresa nyaya dzakakomba kune vese mhuri nevanhu.
Nharaunda dzayo dzekufarira ndedzekushanda pamwe nevanhu vane kushushikana, kushushikana, hukama husina kujairika, kuzivikanwa kwechikadzi, kuzivikanwa pabonde, dambudziko rekutenda / kupora kubva muchitendero, kushungurudzwa pabonde, uye kushungurudzika / kurasikirwa. Ane ruzivo rwekuratidzira / kupindura kurapa, CBT, uye DBT. Dzidziso dzake dzedzidziso dzinoenderana nevakadzi vanovakira, mhinduro-yakatarisana nemishonga, ine tarisiro pakufunga uye kutaura kwechokwadi. Iye ane hutano hwepabonde uye ane ruzivo rwega neasina-monogamy, ngochani uye ngochani vanhu, uye vasiri-mabhinari vanhu. Kana asiri kushanda, anonakidzwa nekupedza nguva nemurume wake, vavanoshanda navo, pamwe nevana. Iye anokurudzira katsi uye kitsi kuburikidza nekununura kwenzvimbo uye anofarira kubika, kuridza cello, kuimba, kufamba, kurima (asi chete madomasi), uye kutamba mitambo yemavhidhiyo.
Kuzvipira Engagement Manager
Emily chiitiko chakakwanisika Kugadzira & Management ...
... Nyanzvi, kubva paVazvipiri kuedza kwePride Festivals mumakore akapfuura akati wandei ekutarisira zviuru zana zvevanoenda kuComic uye Pop Zviitiko zvese pasirese.
Akaona nhengo dzemhuri dzepedyo uye shamwari vachishandisa uye vachivimba nemasevhisi mazhinji anopihwa neCentre yedu uye inodada kuve chikamu chekuona kuti zvirongwa zvakakosha zvakadaro zvinogara munharaunda medu kuburikidza nekubatsira kutsvaga mari & zviitiko.
Iye anogara muBountiful nevana vake vaviri vechidiki uye akanunura fur fur baby.
Maneja weWebhusaiti Admin & Content Coordination
Joni ane Bachelor yake yeScience degree muComputer ...
... Ruzivo Masystem kubva kuRegis University muDenver, pamwe neChitupa cheMasters muKutungamira Sangano Shanduko. Iye zvakare ane akati wandei zvitifiketi muhunyanzvi hunyanzvi seAdobe Creative Cloud suite, UNIX Systems Administration, Oracle Database Administration, Webhu Dhizaini & Kubudirira, uye Web Front-End Injiniya.
Joni anga achishanda nematekinoroji ewebhu kubva uye kubvira 1994 (rangarira browser raMosesi?).
Iye ave pamudyandigere kubva kuIBM kwaakashanda kwemakore asingasviki gumi - yakawanda yenguva iyoyo seTechnical Team Lead, technical Project Lead, uye Tier 10 Web Backend Ruzivo Nyanzvi. Asati adaro, aive nebasa remakore makumi maviri nemashanu paMountain Bell & AT&T muTerevhizheni, Sisitimu Yekufambisa, Yekuvandudza Musangano, uye Yekushandisa Kutonga.
Joni aive mubhodhi reUtah Pride Center (2009-2012) kwaakabatsira kuita iyo Utah Trans Kurume uye Bi + Kurume kuve kwechokwadi (Kufora kwese kwave kwakabatanidzwa neDyke & Interfaith Marches).
Joni anga achizvipira uye / kana neCentre kubvira paakabuda anopfuura makore gumi nemaviri apfuura. Iye achangobva kudzoka kubva pachinzvimbo chehutungamiriri neiyo 1 kusvika ku5 Kirabhu, chirongwa cheBi + cheCentre, kwaakange achizvipira nekuti haachayeuka kuti riini. Joni anga ariwo muchikwata chehutungamiriri cheSage Utah, uye achangotanga boka revagari reBi-Hive (chikamu cheSAGE Utah) icho chaanomhanya munguva yake yemahara.
Akabuda muna 2007 seTransgender Woman. Nguva pfupi yapfuura, akabuda kwaari nevemhuri & shamwari seBondexual. Nhasi, Joni inodada inoratidza se bi, pani, demisexual, greysexual, uye transgender.
Munguva yake yekusarudzika, Joni anofarira kuverenga, mafirimu, kuteerera mimhanzi, kufungisisa, uye kuridza gitare nemadhiramu ega kana nevamwe (Aive mumabhendi akati wandei kubva pagore raakabuda, kusvika 2014. Kubva ipapo akatamba Djembe uye Cajon (percussion bhokisi) nevamwe vaimbi queer.
Joni akashanda panguva imwe chete seLisense Massage Therapist uye Web Nyanzvi kubva muna 2010 kusvika muna 2018 akarembedza maoko ake.
Joni ane shungu yekuona chokwadi bi + uye trans + vanhu uye mamwe mapoka mashoma mukati memhuri yeLBBTQ + anowana zviwanikwa zvavanoda kuti vafambire mberi nehupenyu hwavo.
Munguva yake yekusarudzika anofarira kuzvipira, kuverenga, kuona mabhaisikopo / terevhizheni, kuridza gitare nemadhiramu.
MSW Mumiriri - Boise State
Tascha Carlucci inyanzvi yekiriniki inoshanda mukugamuchira iye Masters muSocial Work ...
... kubva kuBoise State University. Akagamuchira mabachelors ake muSocial Work kubva kuVirginia Intermont College muBristol, Virginia. Iye akazvarwa uye akakurira muWiesbaden, Germany aine mashoma mamiriro ehupenyu akatenderedza nyika yeGerman neSpain. Akatamira kuUnited States muna 2008. Semunhu aitsigira zvechiuto ave nemikana mikuru yekudzokera kuEurope uye achiona dzimwe nyika. Tascha akatamira kuUtah kubva kuNashville, Tennessee kunoshandira Utah Nharaunda Yekuita. Iye ndiye Musha Wemubatsiri Wemubatsiri weCAA uye anga ari mune iro basa kwemakore matatu apfuura. Tascha ane ruzivo mukushanda pamwe nekurapa kwekuchengeta vana, vari panjodzi yevechidiki, vanoshanda mhuri dzinoshanda, uye veterans vasina pekugara / vanhu uye mhuri. Tascha arikutarisira kushanda neLGBTQIA + vanhu uye vachisimbisa mune yavo chaiyo chaiyo. Iye asina mwana wemireniyoni Disney mukuru, anofarira kuona zvinhu zvitsva uye achitamba tafura yemitambo pabhodi. Tascha anogara muSalt Lake City nemumwe wake uye 3 vana vana.
MSW Mumiriri - Univ yeUtah
Jackie Keel inyanzvi yekiriniki inoshanda mukugamuchira iye Tenzi muSocial Work ...
... kubva kuYunivhesiti yeUtah. Akagamuchira Tenzi wake Wedzidzo kubva ku Weber State University uye akamugashira Bachelor yeChirungu kubva kuYunivhesiti yeUtah.
Parizvino anoshanda kuUtah department reHuman Services seJuvenile Competency Attainment Program Administrator achishanda nevechidiki vasingakwanise kumira pamberi pekutongwa.
Akashanda muUtah National Guard kwemakore gumi nemaviri uye murwi wevarwi akashanda panguva ye "Usabvunze Usaudze" nguva.
Iye inhengo yenharaunda yeGBBTQIA + inotsigira kudzikisira rusarura, rusarura uye rusarura.
Jackie anotenda mukugadzira yekusimbisa yemamiriro ekurapa nharaunda kuburikidza nehupenyu-hwepfungwa-hwemagariro-mweya nzira.
Hayley Cook ari intern iye zvino ari kushanda mukuzadzisa Tenzi wavo mu ...
... Yemagariro Basa paYunivhesiti yeUtah. Iye anobva kuSouth California uye akatamira kuUtah makore angangoita mashanu apfuura kunopedzisa Bachelor yavo muSainzi. Hayley ave nezvakaitika zvakasiyana siyana mune rake rese undergraduate uye rakapedza basa iro rave rakanangana nehukama hwepabonde uye hwehukama. Izvi zvave kusanganisira kushanda pamwe neUtah County Rape Crisis Center, iyo Utah State Prison nevepabonde Vanokanganisa Kurapa Chirongwa, pamwe neCase Management Team paYunivhesiti yeUtah ID ID kiriniki inopa rubatsiro kuneVanhu Vanorarama neHIV. Izvo zvakasiyana zvezviitiko izvi zvakamupa iye neakasarudzika nzwisiso uye kunzwisisa kana achishanda nevamwe.
Hayley ane shungu kwazvo dzekushandura runyararo rwemagariro rwakatenderedza hukama hwepabonde uye hukama hwepedyo kubva kumitemo inogadzirwa nekumisikidzwa kumamiriro emumba nepfungwa dzako. Icho chinangwa chaanacho mukushanda nevatengi ku UPC kubatsira mukuwana rusununguko kubva pamhedzisiro yehukama, vezera, mhuri, uye kushorwa kwevanhu. Hayley anotenda zvakadzama musimba rekunzwikwa nekunzwisiswa uye anoedza kupa izvi kune mumwe nemumwe munhu waanoshanda naye uye waanoshanda naye. Izvo zvakakosha kuna Hayley kutsigira vamwe kuburikidza nenzira inoshungurudza-inoziviswa pamwe neyakajeka kuhupenyu hwehupenyu hwako.
Kana Hayley asiri kudzidza kana kushanda anonakidzwa nekufamba, kuve panze, kudya chikafu chakanaka, uye kushandisa nguva neshamwari nevadikani.
Mahalia ndiye Mudzidzisi weSocial Work mudzidzi kuYunivhesiti ...
... weUtah, uye anofara kuve kuUpC kwekutanga kwake kuita, Nyamavhuvhu 2021 kusvika Kubvumbi 2022. Mahalia akapedza kudzidza kubva kuYunivhesiti yeUtah mu2019 aine maBachelor's degree muSociology uye Gender Study, aine mudiki muRudzidziso Zvidzidzo.
Semambokadzi, mukadzi ane polyamorous, Mahalia anokoshesa mukana wekuve chikamu chemunharaunda ye UPC. Anotarisira kuwana ruzivo rwakawanda achishanda nevatengi vane polyamorous, vatengi vekink-positive, uye vatengi vakaona kushungurudzika kwechitendero. Mahalia ari kuramba achishanda kuti avandudze hunyanzvi hwake hwekukurudzira uye pakupedzisira anoda kuzove License Clinical Social Worker achikurudzira kurapa kwevakapona mukukuvara kwekukuvara.
Chalese Meyer mukiriniki wekudzidzira kuenda kuYunivhesiti yeUtah ...
Mudzidzisi weSocial Work chirongwa. Muna 2014, akagashira Bachelor yeSainzi muPaki, Varaidzo, uye Tourism nekukoshesa kurapa kwekuvaraidza kubva kuYunivhesiti yeUtah. Chalese parizvino anoshanda semurapi wezvekuvaraidza, kune wechidiki Psychiatric Residential Treatment Center, kwaanenge achishanda kugadzira yakaoma mutemo & shanduko yesystem kuitira kuti vatengi ve transgender vagone kutarisirwa zvakaenzana uye zvine mutsigo. Iye inhengo yakakosha yenharaunda yeGBBTQIA2S + uye ane shungu dzekutsigira kodzero uye kuiswa kweLGBTQIA2S + vanhu vamwe nevamwe. Iye ane hanya zvakadzama nezve hutano hwepfungwa, kunyanya kuburikidza neinosanganisira yekuvaraidza yekurapa lens inoramba ichikurudzira vatengi vake kuti vafarire kunze, nepo vachigadzirisa zvirongwa uye nehunyanzvi kusangana nezvinodiwa zvemumwe mutengi. Chalese anogara kuUtah nemumwe wake, Jenteal & imbwa yavo Solo. Iye anofarira zvekunze, achiisa pekutanga kuzvitarisira kwake kuburikidza nekumhanya, kuchovha midhudhudhu, snowboarding uye yoga. Chiroto chake ndechekuvhura LGBTQIA2S + imba yeboka yevechidiki vasina kudzidza apo vachipa ruzivo rwakazara pamwe chete neyekurapa kwekuvaraidza, psychoeducation uye zvinodhaka / kupindwa muropa nezvinodhaka.
Mumiriri weOT - Univ yeUtah
Alice akakurira munzvimbo yeDC semwanasikana wevabereki veBritish ...
... uye akatamira kuSLC makore gumi apfuura kudzidza Public Health uye Gender Study, uye kushandisa nguva kunakidzwa nekukwira kwenzvimbo.
Iye zvino ave mugore rake rekupedzisira reiyo Occupational Therapy tenzi chirongwa paUniversity yeUtah uye ari kutarisira kupinda mumunda nekusimudzira nhengo dzemunharaunda. Akashanda kuYouth Resource Center, iyo International Rescue Committee, uye nedzimwe nzvimbo dzisiri dzemari, uye anofara kushanda neUtah Pride Center pakubatanidza zviwanikwa zveTirapational Therapy. Anoda kubatsira vanhu kuwana mukana kune zvese zvezvinhu zvavanoda uye zvavanoda kuita neyakareruka uye mufaro sezvazvinogona.
CMHC Mumiriri - Adler University
Courtney mushandi ari kushanda akananga kune degree raTenzi muClinical Mental Health Counselling ...
... kuAdler University, ine degree reBachelor muPsychology uye Bhizinesi Hutungamiri kubva kuYunivhesiti yePuget Sound. Parizvino anoshanda mumwana anorwara nepfungwa anobatsira vechidiki kubata zviitiko zvakaoma, manzwiro, uye zvese zvinouya nekukura. Courtney ane shungu dzekushanda nevanhu uye kuvabatsira kudzidza maturusi matsva, kuona simba ravo, uye kurarama zvechokwadi.
Lauren ari mudzidzi parizvino ari kushanda akananga kuna Tenzi wake mu ...
... Yemagariro Basa paYunivhesiti yeUtah nechinangwa chekuve LCSW. Akawana Bachelor yeScience mu Psychology kubva kuUtah Valley University muna 2021.
Ane ruzivo rwekushanda mukurapa kwehunhu nevana uye vechidiki uye akazvipira nevanhu vari mumatambudziko. Iye ane shungu dzekushanda pamwe neve LGBTQIA2S + nharaunda uye akabatana neAdolescent Medicine Clinic neGeMS (Gender Management & Support) panguva yese yekudzidzira kwake ku UPC.
Munguva yake yekusununguka Lauren anonakidzwa nekupedza nguva neshamwari uye mhuri, kuenda panze, kuteerera mimhanzi, uye kuchengetedza zvipenga zvemumba. Anonakidzwa nekuwana nguva yekuzvitarisira uye kufunga ari ega uye nevadikani